Vaovao Mafana · Septambra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Mafana · Septambra, 2018
Tantara mikasika ny Vaovao Mafana tamin'ny Septambra, 2018
Shina: CCTV ambanin'ny afon'ny… tsikera
Shina 26 Septambra 2018
Ny alin'ny 9 hifoha 10 febroary, nirehitra ny ampahany iray tamin'ny Tilikambon'ny CCTV, ny Fahitalavitra Foibe ao Shina, raha teo ampiitifirana afomanga ho fankalazana ny fetin'ny Harendrina ny ekipana mpahay momba ny afo (pyrotechniciens) iray. Nahafatesana olona iray, mpamonjy voina, ary naharatràna olona fito sy nahasimbana fotodrafitrasa sy fitaovana mitentina miliara yuan maro izany afo izany.
Amerika Latina 19 Septambra 2018
Dian'ireo mpanivana: Manao famoretana amin'ny fahalalaham-pitenenana i Frantsa, Torkia sy Shina
Frantsa 13 Septambra 2018
Tapa-bolana lasa izay, nampitandrina ny amin'izay antsoiny hoe "fampanjakana miandalana ny Berlusconi eo amin'ny media Frantsay sy ny loza mitatao manoloana ny fipoiran'i Nicolas Sarkozy, minisitry ny atitany Frantsay sady filohan'ny antoko mpandala ny nentin-drazana amin'ny fahalalaham-pitenenana ao amin'ny firenena ny blaogy Frantsay AgoraVox, iray amin'ireo bilaogy mediam-bahoaka Eoropeana malaza.
Maoritania 12 Septambra 2018
Tokony ho tamin'ny 5 ora, ora tao an-toerana (sy GMT), azon'ireo miaramila mpiambina ny filoham-pirenena ny fifehezana ireo tranoben'ny fitantanan-draharaha, ny onjampeo sy ny fahitalavi-pirenena, ary nobahanany ny fidirana tao amin'ny lapa sy ireo minisitera.
Mifandresy Lahatra Miaraka Amin'ny “Hanana” Ny Filankevitry ny Tafika Maoritaniana
Afrika Mainty 12 Septambra 2018
Manao tatitra ny *Al Akhbar (Ireo Vaovao - teny Arabo) tamin'ny 7: 13 hariva ny Filanekvitry ny Tafika ho amin'ny Rariny sy ny Demokrasia dia nifandresy lahatra tamin'ny Saleh Weld Hanana, ilay filohan'ny Reform Knights - izay nitarika ny fanonganampanjakana voalohany tamin'ny Jona 2003. Nogadraina mandrapahafaty i Hanana nanomboka teo.
Afrika Mainty 11 Septambra 2018
Herinandro vitsivitsy lasa izay, sahala amin'ny toa fandresena goavana ho an'ireo mpomba ny fisokafana sy ny fanapariahana ny demokrasia ireo fifidianana tao Etiopia. Tamin'ny alàlan'ny fitaterana ny toa fitomboan'ny seza azon'ny mpanohitra, toerana 12 hatramin'ny 174, ao amin'ny parlemanta izay ahitana toerana 547
Ho avoaka ilay Ejiptiana mpaka sary fanao an-gazety Mahmoud Shawkan rehefa nanapitra ny dimy taona tany am-ponja
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 10 Septambra 2018
"Tsy tokony ho any am-ponja velively izy. Nosamborina izy raha nanao ny asa maha-mpaka sary azy."
Madagasikara – Frantsa: Miteraka Ahiahy Amin'ny Jadon'ny Governemanta Ny Fandroahana Ireo Teratany Frantsay Anankiroa
Afrika Mainty 09 Septambra 2018
Teratany frantsay anankiroa, Christian Chadefaux sy mompera Urfer, nipetraka teto Madagasikara efa am-polo taona maro no namoahan'ny governemanta malagasy didy tamin'iny volana lasa iny (may 2007) fa olona tsy iriana honina eto Madagasikara. Andro vitsy monja taorian'ny nahalany an'i Nicolas Sarkozy ho filohan'i Frantsa izay nanao ho laharam-pahamehana ny fandroahana ireo mpifindramonina tsy ara-dalàna io fanapahankevitra io. Fifanandrifian-javatra ve ? Manome ny heviny ireo malagasy mpitoraka bilaogy .
Egypta: Nifidy ny mpitarika azy ireo vaovao ny Mpirahalahy Miozolomana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 07 Septambra 2018
Nifidy mpitarika vaovao ny Mpirahalahy Miozolomana any Egypta- nifidy an'Atoa Muhammad Bedei. Ho hitanao ato amin'ity lahatsoratra ity ireo fanehoan-kevitry ny bilaogera Egyptiana tamin'ity fanendrena vaovao ity.